Falanqeynta Kulanka Real Madrid VS Valladolid iyo kulamada kale | Warfaafiye
Warfaafiye Arrimaha Bulashada	Falanqeynta Kulanka Real Madrid VS Valladolid iyo kulamada kale
(Sports News) Kooxda Real Madrid ayaa Caawo la filyaa in ay marti u noqoto kooxda Valladolid waxana kulankaas caawo dhaxmaraya labada Kooxood yahay kulan ka tirsan Horyaalka Dalka Spain kaasoo ay ku hardamayaan Kooxa kala duwan .
Kooxda Real Madriid ayaa u safri doonta Kooxda Valladolid oo kulan kaa uu yahay kii ugu horeeyay ee aay isku arkaan xili ciyaareedkaa waaxna kulan kaa uu yahay mid kooxda Madrid il gooniya aay ku eegi doonto .
Madrid ayaa hugaanka looga haya dhibco aad u badan waxna kaga haysa Kooxda Barcelona taa oo dhamaan kulamdii aay ciyaartay aan wali dhinaceeda dhulka la dhigin waxaana kulan Kooxda madrid ee caawo dhaci doona yahay mid Madrid aay ka fikiri doonto.
Kulama kale ayaa la filayaa in aay dhacaan waxaana kulmada dhacaya ka mid ah Kulan ka dhaxmarya Kooxaha Real Sociedad iyo Kooxda Getafa kaa oo ah mid asna labada koxood oo xifaaltan ka dhaxeeya isku hardin doonaan .
Kooxda Malaga ayaa iyana la balansan Kooxda Granada waxana kulan kaa uu yahay mid asna la wada sugayo natiijada ka soo bixi doonta madaama Kooxda Malaga aay ka mid noqotay kooxaha sanadkaa wareega 16ka ugu soo baxay Dalka Spain.
Kooxda Osasuna ayaa gurigeeda ku casuumi doonta Kooxda Valencia waxana kulan kaa uu yahay mid isha lugu wada hayo walow Valancia ay dhawaan ka mid noqtay Kooxaha u soo gudbay wareega 16ka ee Championka .